Seynab Baxsan oo Muqdisho ku geeriyootey | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa Muqdisho Maanta oo Isniin ah ku geeriyootey Allah ha u naxariistee Saynab Xaaji Cali Baxsan, oo ahayd mid kamid ah Fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan, ee mudada dheer fanka kusoo jiray.
Seynab waxay qeyb wayn ka qaadatey fanka Soomaaliya, iyadoo lagu xasuusto inay qaaday heeso wadani ah, oo qaarkood ku guubaabin jirtay Ciidan dalka intii ay dagaalkii ugu horeeyay kula jireen Itoobiya 1964-tii, taasoo billad ku muteysatay.
AUN Seynab Baxsan waxay sanadihii dambe ahayd siriir yaal, oo waxaa hayay xanuun kaasoo sababey geerideeda, sida ay qaar kamid ah ehelkeeda u xaqiijiyeen Keydmedia Online.
Madaxweyne Farmaajo, RW Rooble iyo Mas'uuliyiin kale oo DF katirsan ayaa ka tacsiyadeeyay geeridda Baxsan, oo noqotay tiir duumay, kana baxay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan bahda fanka.
Sanadkan 2020, waxaa Soomaaliya ka dhintay fanaaniin waaweyn oo fanka lagu qadarin jiray.